Tag: agba | Martech Zone
Browserlọ ọrụ ihe nchọgharị ahụ na-aga n'ihu na-agba ọsọ ọsọ na ọhụụ ọhụrụ. Email, n'aka nke ọzọ, na-adọkpụ n'azụ ya na teknụzụ dị ka email lag na-agbaso ihe kachasị ọhụrụ na ụkpụrụ HTML na CSS. Nke ahụ kwuru, ọ bụ ihe ịma aka nke na-eme ka ndị na-ere ahịa dijitalụ na-arụsi ọrụ ike nke ukwuu ịbụ ndị na-agbanwe agbanwe na ihe okike na iji usoro ahịa azụmaahịa a. N’oge gara aga, anyị ahụla nnabata nke gifs, vidiyo, yana emojis
Tọzdee, Nọvemba 29, 2018 Tọzdee, Nọvemba 29, 2018 Douglas Karr
Anyị na onye ahịa na - arụ ọrụ na - etolite na azụmaahịa dị iche iche na - arụ ọrụ na azụmaahịa na - arụ ọrụ na otu n'ime ụzọ dị mkpa bụ ịhazigharị weebụsaịtị ha nke ọma - mkpụrụedemede ọhụrụ, atụmatụ agba ọhụụ, usoro ọhụụ, ihe eserese ọhụụ, yana ihe ngosi ejiri mmekọrịta onye ọrụ. Ihe ngosi ndị a niile ga-enyere onye ọbịa aka na saịtị ha lekwasịrị anya na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ karịa ndị pere mpe. Ekwenyere m na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-emepụta ihe na-atụ uche ụzọ aghụghọ
M a ọkpọ maka a na agba infographic na a infographic si Logo Company bụ ezigbo onye. Ndị ọkà mmụta sayensị na-amụ ụzọ anyị si emeghachi na agba ruo ọtụtụ afọ. Colorsdị ụfọdụ na-eme ka anyị nwee mmetụta n'ụzọ ụfọdụ banyere ihe. Ruo oge onye mmebe ahụ maara ihe agba na mmetụta ndị a bụ, onye mmebe ahụ nwere ike iji ozi ahụ iji nyere aka weta azụmaahịa ahụ n'ụzọ ziri ezi. Ndị a abụghị iwu siri ike na ngwa ngwa
Agba bụ mgbe ọ bụla isiokwu na-adọrọ mmasị ma bụrụ ụfọdụ n'ime ihe ọmụma kachasị ewu ewu anyị kesara na blog. Nhọrọ agba site na okike, akara agba nke weebụ, yana ma ọ bụ agba agba mmetụta ahịa abụrụla ihe ọmụma anyị na-agba. Ihe omuma ihe omuma a sitere na Marketo na Kọlụm Ise na-enye echiche dị iche… ihe agba na-ekwu banyere akara gị. Marketo: A na-akọwa ụdị ndị a kacha mara amara n'ụwa site na agba ha. Chee echiche banyere McDonald's